शीर्षकमा बाइबल पदहरू: भगवानका नामहरू -> भगवान
भगवान: [भगवानका नामहरू]
 परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “म जो हुँ, उही हुँ। तैँले तिनीहरूलाई भन्‍नू, ‘म हुँ भन्‍नुहुनेले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभएको हो।’ इस्राएलीहरूलाई भन् कि म परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरू अब्राहाम, इसहाक र याकूबका परमेश्‍वरले तँलाई तिनीहरूकहाँ पठाएको हुँ। सधैँको निम्‍ति मेरो नाम ‘म हुँ’ हो। भविष्‍यका पुस्‍ता-पुस्‍ताले मलाई त्‍यही नामले पुकार्नेछन्।
“कुनै खराब उद्देश्यको निम्ति मेरो नाम नलिनू किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ र मेरो नामको दुरुपयोग गर्नेलाई म दण्‍ड दिनेछु।
“अरू कुनै देवताको पूजा तिमीहरूले नगर्नू किनभने म परमप्रभु डाह गर्ने परमेश्‍वर हुँ।
सुरुमा जब परमेश्‍वरले आकाश र पृथ्‍वी सृष्‍टि गर्नुभयो,
अब्राम उनान्‍सय वर्षको हुँदा परमप्रभुले उनलाई दर्शन दिएर भन्‍नुभयो, “म सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर हुँ। मेरो आज्ञा मान् र सधैँ जे ठीक छ, त्‍यो गर्‌।
यसकारण परमप्रभु आफैंले तिमीलाई एउटा चिनो दिनुहुनेछ; एउटी कन्‍या गर्भवती हुनेछ र एउटा छोरो जन्‍माउनेछ र उसको नाम ‘इम्‍मानुएल’ राखिनेछ।
“म मात्र तेरा परमप्रभु परमेश्‍वर हुँ, म आफ्‍नो महिमा अरू कुनै देवी-देवतालाई दिनेछैनँ। म आफ्‍नो प्रशंसा कुनै मूर्तिलाई दिनेछैनँ।
“म परमप्रभु हुँ, अरू कुनै परमेश्‍वर छैन, तैँले मलाई नचिने पनि चाहिएको बल म तँलाई दिनेछु।
जब परमप्रभु नजिक हुनुहुन्‍छ, उहाँतिर फर्क र उहाँलाई बिन्‍ती गर।
परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “यसकारण म एकै पल्‍टमा ती जातिहरूलाई सदाकालको निम्‍ति मेरो शक्ति र सामर्थ्‍य देखाउनेछु। म परमप्रभु हुँ भनी तिनीहरूले जान्‍नेछन्।”
सृष्‍टि हुनुभन्दा अघि नै वचन हुनुहुन्‍थ्‍यो। वचन परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्‍थ्‍यो र वचन परमेश्‍वर नै हुनुहुन्‍थ्‍यो।
दूतले सोधे, “किन मेरो नाम चाहियो? यो एउटा उदेकको नाम छ।”
मसँग गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्ने इच्‍छा छँदैछैन भने मेरा नाममा केही प्रतिज्ञा नगर्नू। नत्र त्‍यसले मेरो नामको अनादर हुनेछ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ।
अब तिमीहरू गएर सबै मानिसहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाओ। तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्‍माको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा देओ।
परमप्रभु एउटा बलियो धरहराजस्‍तै हुनुहुन्‍छ, जहाँ धर्मीहरू गएर सुरक्षा पाउँछन्,
स्‍वर्गमा को पुगेर फर्की आएको छ र? कसले बतासलाई आफ्‍नो मुट्ठीमा समातेको छ र? अथवा, कसले समुद्रलाई लुगाको टुक्रामा बाँधेको छ र? अथवा कसले पृथ्‍वीको साँध-सिमाना तोकिदिएको छ र? त्‍यसो गर्ने को हुन्? के तिमी जान्‍दछौ? तिनका छोरा को हुन्?
यसैले मेरा प्रतिज्ञाअनुसार दिनप्रतिदिन तपाईंलाई भेटी चढाएर म तपाईंको प्रशंसाको भजन सधैँ गाउनेछु।
“म आदि र अन्‍त हुँ,” भनेर सर्वशक्तिमान् परमप्रभु परमेश्‍वरले भन्‍नुहुन्‍छ— उहाँ हुनुहुन्‍छ, हुनुहुन्‍थ्‍यो र आउनुहुनेछ।
 कोही आफ्‍नो लडाइँका रथमाथि भर पर्दछन् र कोही आफ्‍ना घोडामाथि, तर हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको शक्तिमा भर पर्दछौं। ती मानिसहरू ठेस खाएर लड्‍नेछन्। तर हामी उठेर दृढ खडा रहनेछौं।
 यसरी स्‍वर्ग, पृथ्‍वी र पृथ्‍वीमुनि भएका सबैले येशूको नाउँको आदर गर्न घुँडा टेक्‍नेछन्। येशू ख्रीष्‍ट नै प्रभु हुनुहुन्‍छ भनेर सबैले खुल्‍लमखुल्‍ला परमेश्‍वरको सम्‍मान्‌को निम्‍ति घोषणा गर्नेछन्।
 तर मोशाले उत्तर दिए, “जब म इस्राएलीहरूकहाँ गएर ‘तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्‍वरले मलाई पठाउनुभएको हो’ भनुँला, तब ‘उहाँको नाम के हो’ भनी तिनीहरूले मलाई सोधे भने मैले के भन्‍नु?” परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “म जो हुँ, उही हुँ। तैँले तिनीहरूलाई भन्‍नू, ‘म हुँ भन्‍नुहुनेले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभएको हो।’ इस्राएलीहरूलाई भन् कि म परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरू अब्राहाम, इसहाक र याकूबका परमेश्‍वरले तँलाई तिनीहरूकहाँ पठाएको हुँ। सधैँको निम्‍ति मेरो नाम ‘म हुँ’ हो। भविष्‍यका पुस्‍ता-पुस्‍ताले मलाई त्‍यही नामले पुकार्नेछन्।